Zvese zvatichaona pane iyo iPhone 6s | IPhone nhau
Nekuratidzwa kweiyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus padhuze nepakona, panotova nezvakawanda zvimiro zvaro izvo 99% zvakasimbiswa, sekuuya kwemakamera akavandudzwa kana yekumanikidza inozivikanwa system inozivikanwa seMasimba Kubata, Kunyange hazvo zvese zvichiratidza kuti ichachinja zita rayo kubva muna Gunyana 9. Pachave nezvinhu zvisingadiwe nemunhu, zvakaita sebhatiri repasi kana kuti 16GB modhi inoramba ichivapo, asi pachavewo nezvimwe zvinhu zvinotarisirwa, sekuwedzera kwe RAM. Muchikamu chino tichakudzidzisa zvese zvichaunzwa pane iyo iPhone 6s.
1 IPhone 6s dhizaini
2 A9 processor
3 2GB ye RAM
5 Makamera ari nani
6 Chengetedzo imwechete
7 Kumanikidza Kubata nerimwe zita
8 4G Yakawedzerwa
9 IPhone 6s mavara
IPhone 6s dhizaini
Kunge ese "S" mamodheru, dhizaini yeiyo iPhone 6s ichave iri zvakafanana nemhando yapfuura, asi neshanduko diki. Iyo yakakurumbira bendgate yakamanikidza Apple kwete chete kuti ishandise inodzvinyirira zvinhu (7000 dzakateedzana aluminium), asi kuti ishandise yakawanda yakawanda, izvo zvichaita iyo iPhone 6s mukobvu zvishoma, kureba uye kupamhama, asi chete chegumi che millimeter, chatisingazocherechedze chero nekuona kana nekubata. Kuwedzera kwayo kukuru kuchave muhupamhi, asi ichave yakafara chete 0,5mm kupfuura iyo yazvino modhi.
Nezve izvo zvinhu, zvakave zvakasimbiswa kuti zvakasiyana nekuti iyo casing inorema zvishoma uye iri gobvu.
Iyo processor yeiyo iPhone 6s ichave ingangoita a 30% inowedzera simba kupfuura yemhando yapfuura uye ichiri kushandisa mashoma simba nekuda kwayo 14nm. Chichava chip chakafanana neS1 yeApple Watch, iyo inogona kuwedzera zvimwe zvikamu mupakeji imwechete uye zvobva zvanyatsoita basa, iine 30% yakaderera simba rekushandisa. Zvinoenderana nemabenchmark akaunganidzwa, iyo A9 ichave iine simba (imwechete musimboti) kupfuura iyo Exynos 7420 inoshandiswa mune ese maGirazi S6. Zvese izvi zvinogona kuwanikwa mu15% zvishoma muhukuru.
2GB ye RAM
Apple yanga ichishandisa 1GB ye RAM kubva pa iPhone 5 kuenda kune iyo iPhone 6, asi nguva yasvika yekuwedzera iyo nhamba. Iyo iPhone 6s inosvika ne 2GB ye RAM (LPDDR4), iyo yaizokutendera iwe kushandisa mamwe matsva iOS 9 maficha senge Mufananidzo-mu-Mufananidzo kana kupatsanura skrini. Iyo yazvino modhi inoshandisa LPDDR3 RAM uye inomhanya pane yakaderera wachi kumhanya.
Nhau dzakaipa kune avo vedu avo vaitarisira bhatiri hombe. Iyo iPhone 6s inoshandisa bhatiri rinodonha kubva ku1810mAh kusvika 1715mAh uye iyo iPhone 6s Plus inodonha kubva ku2915mAh kusvika 2750mAh, iko kuderera kwe5,5% chete uchienzaniswa nebhatiri remhando dzazvino. Zvingangodaro, kuzvitonga kuchachengetedzwa, asi Tim Cook nekambani vanofanirwa kuyeuchidzwa kuti kuzvimiririra kwemidziyo yazvino hakuna kukwana kune vazhinji vashandisi.
Makamera ari nani
Zvese zvinoratidzira kuti ese ari maviri makamera eiyo iPhone 6s achavandudzwa zvine chekuita neiyo eiyo iPhone 6. Iyo huru kamera ichave 12 megapixels uye ndichanyora ne 4K mhando, kuwedzera kwe50% pamusoro pezvino 8 megapixel modhi. Iyo nyowani yechiratidzo chiratidzo processor yakawedzerwa kune iyo A9, iyo inobatsira kugadzirisa mufananidzo uye kutora zvirinani mifananidzo mune ese mamiriro, asi izvo isu isu tichanyanya kucherechedza mumifananidzo inotorwa mune yakaderera mwenje mamiriro.
Iyo FaceTime kamera ichave 5 megapixels, inokwakuka kusvetuka kubva ku1.2 inoshandiswa neyezvino modhi. Kuchave ne software-based flash yemifananidzo iri nani mune yakaderera mwenje mamiriro. Uye zvakare, tinogona kunyora kufamba zvishoma uye ita panoramic mifananidzo kubva kuFaceTime kamera.
Imwe yenyaya dzakaipisisa ndeyekuti ichaenderera nekuchengetwa kumwechete kwema modhi apfuura, zvinoreva kuti modhi yepasi ichagara 16GB, chimwe chinhu chiri pachena kuti hachina kukwana uye zvakanyanya saka kana tichifunga kuti tinogona kurekodha mavhidhiyo mu4K. Iyo mimwe mienzaniso miviri inosara 64GB y 128GB.
Kumanikidza Kubata nerimwe zita
Iyo iPhone 6s ichave iri yekutanga iPhone ne Simbisa kubata, Sisitimu iyo Apple ichapa rimwe zita Chitatu chinotevera. Kana tichimanikidza nesimba rakati wandei, isu tinogashira kudedera mumunwe izvo zvicharatidza kuti isu takaita iyo Force Touch uye tinogona kuishandisa kumisikidza mitsva sarudzo nemamenyu, sekuisa chiratidzo pamamepu. Chichava chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru uye, semazuva ese, zvinotarisirwa kuti pakutanga zvinongoshanda chete nemaApplication ekushandisa kudzamara kana ivo vagadziri vazvigamuchira kana Apple vatendera kuti vaishandise.
4G kumhanya kuchawedzera nekuda kweiyo nyowani Qualcomm MDM9635M LTE chip, inova 50% nekukurumidza kupfuura iyo yapfuura modhi. Nemuenzaniso uyu tinogona kusvika kumhanya kunosvika mazana matatu emamirimita, kuchipeta kumhanya kwazvino kwe300Mbps zvakanyanya.
IPhone 6s mavara
Iyo iPhone 6s ichave iine iwo iwo mavara seiyo yapfuura modhi (sirivheri, goridhe uye nzvimbo grey) uye modhi nyowani inogona kuzosvika. Ruvara rweiyi modhi nyowani yakanzi yakamutswa goridhe kuti ifanane neApple Watch Edition yemuvara mumwe chete, asi zvinowanzoitika kuti iro idzva ruvara ndarama yakasviba yakafanana neiyo ruvara rwemhangura.
Pakave nekufungidzira kwakawanda kuti mutengo waizowedzera, asi hazviite. Mutengo uchave wakaenzana neiyo iPhone 6 yaive ikozvino nemwedzi gumi nemaviri yapfuura uye ichave seinotevera:
Munyika dzekutanga, dzakaita seFrance, kuchengetedza kunogona kuitwa kubva munaGunyana 11 kuti uigamuchire pazuva racho September 18. Apple iri kugadzira huwandu hukuru hwe iPhone 6s, saka ndinovimba nyika dziri muchikwata chechipiri dzichakwanisa (kana kuzokwanisa) kuitenga kubva kutanga kwaGumiguru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Zvese zvatichaona pane iyo iPhone 6s
Mhoroi, Pablo, iwe unogona here kundipa iyo sosi pane mabenchmarking eA9? Ini ndakangokwanisa chete kuwana nzvimbo dzinotaura nezve bvunzo dzemukati (dzakaitwa naApple) kuwedzera kune mhedzisiro (zvakare yemukati) yeiyo Exynos M1.
Idzo dzakashata kwazvo uye dzinoodza moyo nhau. Sony yaunza yayo Xperia Z5 svondo rino. Iyo compact 4,6-inch modhi, saizi yakafanana neiyo iPhone 6, inoratidzira 23 mpx kamera ine g lens, ISO 12800 mumufananidzo, ISO 32000 muvhidhiyo, x5 zoom yedhijitari isina kurasikirwa kwehunhu, 2700 mAh bhatiri, uye yakanakisa chinyorwa chemhando yepamusoro. Apple iri kuzozviratidza neayo 2gb yegondohwe uye 12mpx sekunge chiri chimwe chinhu chinoshamisa, uye iko kubata kwechisimba chinhu chisina chakakosha. Vanhu ava vanoda kutengesa vhiri, asi izvo zvakatogadzirwa.
Pindura Nguva yechando
Iwo makamera, processor, gondohwe uye iyo LTE chip yakavandudza zvakanyanya. Uye zvakare, ivo vakashandisa tekinoroji nyowani senge iyo foce touch. Havaite senge dzisina kunaka kwandiri. Iyo Z5 compact ichave iri yakaoma mukwikwidzi kana zvasvika kune Hardware. Izvo zvisina kundipa chivimbo cheZ5 compact ndiko dhizaini, yakanyanyisa uye chinhu chitsva chandisingade zvachose.
Diego HC- akadaro
Chii chinobuda naSony pakuburitsa foni ine kamera ine huwandu hwakanyanya hwemamegapixels uye 5 zoom yedhijitari, apo sensor yayo icharamba iri yemhando yepamusoro (z5)? (parizvino ndine sony ine 13 mpx kamera) uye nokutendeseka mapikicha haafananidzi neaya emukadzi wangu iphone 6 uye izvi zvinongoitika nekuti kana uchiedza kuisa mapikisheni akawanda munzvimbo diki yakadaro, vanofanirwa kuita iwo madiki kwazvo, uye izvo zvinoita kuti vatore mwenje mushoma ... saka, kana uchishanda munzvimbo dzakashomeka mwenje zvishoma, ruzha runosemesa runozvarwa mumifananidzo yedu uye chinhu chega chatinowana mifananidzo isina kunaka, isingashandisike, yakasviba uye saizi yakakura muMB. zvakadaro ... (panguva ino ndanyadziswa neiyo xperia c4 uye nekukurumidza sezvandinogona, ndichadzokera kune apple brand)
nongedzera, iyo xperia bhatiri
Pindura Diego HC-
Izvo hazvizvifarire asi zvinotengesa, izvo zviri kugadzira kukosha mukambani. Uchaona kuti anotengeswa zvakadarika sei Z5, S6 Lg G4 ……… hazvisi zvese mavitamini uye jimu, iwe zvakare unofanirwa kuve ne charisma uye unodikanwa uye iyo iPhone inoramba ichiratidza kwenguva iyo yavanayo
Pindura kune elpaci
Radiation Island. Zviwane mahara mwedzi uno nekuda kweGNN. Tinokuratidza sei